चाडपर्वको भीड हेरेर ठग्दैछन्, व्यवसायी, मुल्य निर्धारण र प्रभावकारी अनुगमनमा निर्ह्य सरकार – Mission Khabar
चाडपर्वको भीड हेरेर ठग्दैछन्, व्यवसायी, मुल्य निर्धारण र प्रभावकारी अनुगमनमा निर्ह्य सरकार
मिसन खबर २२ आश्विन २०७५, सोमबार ११:५७
काठमाडौं/इटहरी/चितवन– सरकारी निकाय अनि उद्योगी व्यवसायी बजारमुल्य अनियन्त्रित भएको स्विकार्नै तयार छैनन् । सरकार अनुगमन देशव्यापी बनाएको दाबी गरिरहेको छ । अनि देशका विभिन्न शहरमा अनुगमनको मौसमी छनक पनि देखिएको छ । तर अनुगमनकर्ताले सरकारलाई दिएको रिपोर्ट जस्तै बजार नियन्त्रणमा छैन ।
बरु चाडपर्वको भीडले व्यापारिलाई ठग्न पे्ररित गरिरहेको छ । न सरकारले चाडपर्व लक्षित भन्दै सञ्चालनमा ल्याएका सुपथ मुल्य पसलबाट उपभोक्तालाई राहत मिलेको छ न अन्य पसल नै सहज छन् । काठमाडौंका उपभोक्ता मात्रै होइन बुटवल, चितवन, पोखरा, इटहरी लगायतका धेरै शहरमा महंगीको मारमा परेको भन्दै लत्ताकपडा र खाद्यान्नको महंगीले दशै तिहार र छठ महंगो बन्ने गुनासो आइरहेको छ । बजारमा उपभोक्ताको भीड बढेसँगै ठगिन थालेको बताउँछन उपभोक्ता ।
हुनत, महंगी दशै लक्षित नभएको व्यापारिहरुले भनिरहँदा उपभोक्ता साविकभन्दा १० देखी १५ प्रतिशतसम्म मुल्य थपिएको बताउँछन् । तर यी र यस्ता व्यवसायी सरकारी अनुगमन टोलीले भेटेको छैन, उपभोक्ताको गुनासो बारेपनि अनुगमन टोली बेखबर छ । राजधानीका विभिन्न सपिङ मलमा लागेको सेवाग्राहीको भीडलाई व्यापारिले अवशरका रुपमा हेरेका छन् । कपडा मात्रै होइन, होलसेल व्यापारीदेखि किराना पसलले समेत ढुवानी, भन्सारदर लगायतको वाहनाबाजीमा उपभोक्ता ठग्न क्रियाशिल देखिएका छन् । लत्ताकपडा, खाद्य सामाग्री मात्रै होइन, चाडपर्व नजिकको यात्रामा समेत उपभोक्ता ठगिदैछन् । टिकट अभाव देखाउदै महंगी अशुल्दा समेत सरकारी निकायले देखेका छैनन ।
अब राहत र सहुलियतको कुरा गर्ने सरकारमाथी नै प्रश्न उब्जिएको छ । उपभोक्ता पनि सरकारको अनुभुति गर्न नपाएको भनिरहेका छन् । उपभोक्तामाथी कर अशुल्न खुद्रा पसल थाप्न निक्कै हतारो गर्ने सरकारले बजारमुल्य निर्धारण गरेर अनियन्त्रित बजारलाई रोक्न किन सक्दैन ? बजारको मनोमानी जानिजानी हो वा सरकारको अज्ञानी हो ? उपभोक्ता प्रश्न गरिरहेका छन् ।